သင်၏စီးပွားရေး၊ ဆိုက်နှင့်အက်ပလီကေးရှင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုအကောင်းဆုံးမည်သို့ရှာဖွေမည်နည်း Martech Zone
Apple ၏သတင်းများကယင်းကိုပြန့်ပွားစေသည် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အားထုတ်မှု ကျနော့်အမြင်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာသတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါမိုက်ခရိုဆော့သည်ဂူးဂဲလ်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုအမြဲမျှော်လင့်ခဲ့သည်။ Bing သည်မည်သည့်အခါကမျှကြီးမားသောယှဉ်ပြိုင်မှုအဆင့်သို့ရောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သူတို့ကိုယ်ပိုင်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် embedded browser များဖြင့်စျေးကွက်ဝေစုကိုပိုမိုရယူနိုင်သည်ဟုသင်ထင်လိမ့်မည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကဘာကြောင့်မလုပ်နိုင်ကြတာလဲ။ ဒါပေမယ့် Google က ၉၂.၂၇% ဖြင့်ဈေးကွက်ကိုလုံးဝလွှမ်းမိုးထားတယ်။ စျေးကွက်ပမာဏ... နှင့် Bing မျှသာ 2.83% ရှိပါတယ်။
ကျွန်ုပ်သည် AppleTV ပရိသတ်တစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့တာဆယ်နှစ်ရှိပါပြီ။ သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ဟာကျွန်တော့်ကို AppleTV's တစ်ခုမှ ၀ ယ်ပေးသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါအလုပ်လုပ်တဲ့ဆော့ဝဲလ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ Apple ကိုမွေးစားချင်ခဲ့တယ်၊ ငါနဲ့ငါ့သူငယ်ချင်းဘီလ်တို့ကုမ္ပဏီမှာ Mac လက်တော့ပ်ကိုပထမဆုံးသုံးခဲ့တဲ့လူနှစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူး။ ငါသိတဲ့လူအများစုကအက်ပဲလ်ကိုဝေဖန်တာကကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုအပေါ်မှာအာရုံစိုက်ပြီးကြီးမားတဲ့ပုံရိပ်ကိုလက်လွတ်လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ သင်သည်အိမ်တွင်သို့မဟုတ်အလုပ်တွင် Apple ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုနေစဉ်ချောမွေ့သောအတွေ့အကြုံ၊ ပေါင်းစည်းမှုနှင့်အသုံးပြုမှုသည်မတူနိုင်ပါ။ ထို့အပြင် Google နှင့် Microsoft တို့ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်အရာမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်အပေါ်အခြေခံပြီးရှာဖွေမှုရလဒ်များ၏တိကျမှန်ကန်မှုကို Apple အတွက်မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည် iTunes, AppleTV, iPhone, Apple Pay, Mobile App, Safari, Apple Watch, MacBook Pro နှင့် Siri တို့ဖြစ်သည် အသုံးပြုမှု - တစ်ခုချင်းစီကို Apple အကောင့်တစ်ခုမှတဆင့်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အားလုံး - မတူနိုင်ပါ။ ဂူဂဲလ်သည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ညွှန်းကိန်းများအပေါ်ပြင်ပတွင်အာရုံစိုက်နေစဉ် Apple သည်တူညီသောဒေတာကိုအသုံးချနိုင်သည်၊ သို့သော်ရလဒ်များကို၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များ၏အပြုအမူများနှင့်ပေါင်းစပ်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောပစ်မှတ်နှင့်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Apple ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်ကောလဟာလမဟုတ်တော့ကြောင်းဖော်ပြရန်အရေးကြီးသည်။ Apple ၏လည်ပတ်မှုစနစ်များအတွက်နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်အတူ Apple Spotlight ကို မည်သည့်ပြင်ပရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုမှအသုံးမပြုဘဲဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုတိုက်ရိုက်ပြသသောအင်တာနက်ရှာဖွေမှုများကိုပေးထားသည်။
Apple သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုတွားသွားကြောင်းအမှန်တကယ်အတည်ပြုခဲ့သည်။ browser အခြေပြုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မရှိသော်လည်းအက်ပဲလ်သည်၎င်း၏ virtual assistant ဖြစ်သော Siri ကိုတိုးမြှင့်ရန်ပလက်ဖောင်းကိုစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ရသည်။ Siri သည် iOS, iPadOS, watchOS, macOS နှင့် tvOS လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအသံမေးမြန်းချက်များ၊ အမူအရာထိန်းချုပ်မှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်၊ အကြံပြုချက်များပေးရန်နှင့်လုပ်ဆောင်မှုများပြုလုပ်ရန်အတွက်သဘာဝဘာသာစကားအသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Siri ၏စွမ်းအားသည်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အသုံးပြုမှု၊ ရှာဖွေမှုနှင့်စိတ်ကြိုက်များကိုဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြန်လာသောရလဒ်တိုင်းသည်တစ် ဦး ချင်းစီဖြစ်သည်။
သင်၏ Robots.txt ဖိုင်ကိုသင်၏အက်ဘ်ဘ်အားမည်သို့တွက်ချက်မည်ကိုဖော်ပြရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Apple Search Ranking Element တွေကို
Apple ကထုတ်ဝေပြီးသားဒီအရိပ်အမြွက်ရှိပါတယ်။ အက်ပဲလ်သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စံနှုန်းများကိုလက်ခံကျင့်သုံးခဲ့ပြီး၎င်း၏ထောက်ခံမှုစာမျက်နှာတွင်၎င်း၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များအားဤမရေရာစွာခြုံငုံဖော်ပြခဲ့သည် applebot တွှေ:
စုစုပေါင်း အသုံးပြုသူထိတွေ့ဆက်ဆံမှု ရှာဖွေမှုရလဒ်များနှင့်အတူ
ရှာဖွေရေးဝေါဟာရများ၏သက်ဆိုင်မှုနှင့် ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာအကြောင်းအရာများနှင့်အကြောင်းအရာများနှင့်ကိုက်ညီခြင်း
အသုံးပြုသူ တည်နေရာ -based အချက်ပြမှုများ (ခန့်မှန်းခြေဒေတာ)
သုံးစွဲသူများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်မူပြောင်းခြင်းသည် Apple အတွက်အခွင့်အလမ်းများစွာပေးလိမ့်မည်။ ပြီးတော့ Apple ရဲ့အသုံးပြုသူရဲ့ privacy ကိုကတိက ၀ တ်ပြုမှုကြောင့်သုံးစွဲသူများကိုမသက်မသာဖြစ်စေမှာပါ။
App ကို Optimization မှ Web ကို
အကြီးမားဆုံးသောအခွင့်အလမ်းသည်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းနှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ရှိနေသည့်ကုမ္ပဏီများနှင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ iOS application များနှင့် web ချိတ်ဆက်ရန် Apple ၏ကိရိယာများမှာအတော်လေးကောင်းပါသည်။ ဒီအက်ပလီကေးရှင်းကို iPhone အက်ပလီကေးရှင်းတွေနဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့နည်းလမ်းအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။
Universal လင့်များ။ စိတ်ကြိုက် URL အစီအစဉ်များကို HTTP သို့မဟုတ် HTTPS လင့်များဖြင့်အစားထိုးရန် universal link များသုံးပါ။ Universal လင့်ခ်များသည်အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ အကယ်၍ အသုံးပြုသူများသည်သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းကိုတပ်ဆင်ထားလျှင်၎င်း link သည်သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းသို့တိုက်ရိုက်ပို့သည်။ သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းကိုတပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပါကလင့်ခ်သည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို Safari တွင်ဖွင့်နိုင်သည်။ universal link များမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာရန်အတွက်ကြည့်ပါ Universal Links များကိုထောက်ပံ့ပါ.
စမတ် App ကို Banners ။ သုံးစွဲသူများသည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကို Safari တွင်သွားရောက်ကြည့်ရှုသောအခါ Smart App Banner ကသင်၏အက်ပလီကေးရှင်းကို (ထည့်သွင်းထားပါက) ဖွင့်ရန် (သို့မဟုတ်မထည့်သွင်းထားပါက) သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ခွင့်ပြုသည်။ Smart App Banners အကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုလျှင်၊ Smart App Banners ဖြင့်အက်ပ်များကိုမြှင့်တင်ခြင်း.
လက်ရှောင်သည်။ Handoff သည်သုံးစွဲသူများအားစက်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်စေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သူတို့၏ Mac ပေါ်တွင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုကြည့်သောအခါသူတို့ iPad ရှိသင်၏မူလအက်ပလီကေးရှင်းသို့ချက်ချင်းသွားနိုင်သည်။ iOS9နဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ Handoff မှာ app ရှာဖွေခြင်းအတွက်အထူးအထောက်အပံ့ပါဝင်သည်။ Handoff ကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာလိုလျှင်၊ handoff အစီအစဉ်ပြုလုပ်ခြင်းလမ်းညွှန်.
Apple က robots.txt ဖိုင်များနှင့် index tagging ကဲ့သို့သောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စံနှုန်းများကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ Apple သည်၎င်းကိုလည်းလက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သည် Schema.org AggregateRating, Offers, PriceRange, InteractionCount, Organization, Recipe, SearchAction, နှင့် ImageObject အပါအ ၀ င်သင့်ဆိုဒ်သို့ metadata ထည့်ရန်အတွက်ကြွယ်ဝသောအတိုအထွာများစံ။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အားလုံး သင့်ရဲ့ content တွေကိုရှာ, တွားနှင့် index အလားတူစွာဖြင့်သင်၏အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သို့မဟုတ်အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးပလက်ဖောင်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထို့အပြင်သင်၏ဆိုဒ်နှင့်မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည် Apple ၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နှင့်သင်၏စွမ်းရည်ကိုများစွာတိုးတက်စေသင့်သည်။
သင်၏လုပ်ငန်းကို Apple Maps Connect နှင့်မှတ်ပုံတင်ပါ
သင့်တွင်ဒေသဆိုင်ရာဖောက်သည်များကသင့်ကိုရှာရန်လိုအပ်သည့်လက်လီတည်နေရာသို့မဟုတ်ရုံးခန်းရှိပါသလား။ သင်လုပ်လျှင်မှတ်ပုံတင်ရန်သေချာပါစေ Apple Maps ချိတ်ဆက်မှု သင်၏ Apple login ကိုသုံးခြင်း ၎င်းသည်သင်၏စီးပွားရေးကို Apple Map တွင်ထည့်။ လမ်းညွှန်မှုကိုလွယ်ကူစေသည်သာမက Siri နှင့်လည်းပေါင်းစပ်ထားသည်။ ထို့အပြင်သင်လက်ခံသည်ဖြစ်စေလက်ခံသည်ဖြစ်စေထည့်သွင်းနိုင်သည် Apple Pay ကို.
သင်၏ဆိုက်ကို Apple နှင့်မည်သို့စစ်ဆေးရမည်နည်း
အက်ပဲလ်က ရိုးရှင်းတဲ့ tool ကို သင်၏ဆိုဒ်ကိုရည်ညွှန်းနိုင်ပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အခြေခံအမှတ်အသားများရှိမရှိခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်။ ကျွန်ုပ်ဆိုက်အတွက်ခေါင်းစဉ်၊ ဖော်ပြချက်၊ ရုပ်ပုံ၊ ထိတွေ့မှုသင်္ကေတ၊ အချိန်ထုတ်ဝေမှုနှင့် robots.txt ဖိုင်များကိုပြန်ပို့သည်။ ငါ့မှာ mobile app မရှိဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ app မရှိဘူးဆိုတာပဲ။
သင်၏ဆိုက်ကို Apple ဖြင့်အတည်ပြုပါ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် Apple ရဲ့ရှာဖွေမှုရလဒ်တွေမှာသူတို့ရဲ့တည်ရှိမှုကိုခြေရာခံနိုင်အောင်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့ရှာဖွေရေး console တစ်ခုပေးဖို့ Apple ကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည် Siri Voice စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာမက်ထရစ်အချို့ကိုပေးနိုင်ပါက၎င်းသည် ပို၍ ပင်ကောင်းပေလိမ့်မည်။
Apple ကဂူးဂဲလ်ထက် privacy ကိုလေးစားမှုရှိတာကြောင့်ငါမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့နေတယ်။ ဒါပေမယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေသူတို့ရဲ့မြင်သာမှုကိုတိုးတက်အောင်ကူညီနိုင်တဲ့မည်သည့်ကိရိယာကိုမဆိုတန်ဖိုးထားလိမ့်မည်။
Tags: ပန်းသီးပန်းသီး botပန်းသီးမြေပုံများApple Maps ချိတ်ဆက်သည်ပန်းသီးပန်းသီးရှာခြင်းပန်းသီးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ပန်းသီးလက်ပတ်နာရီပန်းသီးကဗျာiOSiphoneitunesမိုဘိုင်း appSafari ဥယျာဉ်ကိုလည်းအသံရှာဖွေမှု